Autorun ပိတ်ထားမယ် - .::just for share::.
Home » Knowledge » Autorun ပိတ်ထားမယ်
မင်္ဂလာပါဗျာ ဒီနေ.ကျွန်တော်တင်ပေးချင်တာကတော့ မိမိတို.ကွန်ပြူတာမှာ Autorun Service ကိုပိတ် ထားနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ် သိပြီးသားသူတွေတော့ကျော်သွားလိုက်ပါဗျာ......မသိသေးသူတွေအတွက် တော့ အသုံးဝင်လိမ့်မယ်လို.ယုံကြည်.ပါတယ် ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရရင်
ဗိုင်းရပ်စ်ဆိုသောအရာမျိုးက သူ.တစ်ဦးတစ်ယောက်ထဲ မည်သို.မှ မ run နိုင်လို.ပါ (user က သွားပြီး Double Click မနှိပ်ခဲ့ရင်ပေါ့) ဗိုင်းရပ်ဖိုင်တိုင်းဟာAutorunဖိုင်နဲ.တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ပါတယ် ဒါ့ကြောင့် အခုလို autorun services ပိတ်ထားမယ်ဆိုရင် Virus အလွယ်တကူဝင်ရောက်ခြင်းမှကာကွယ်နိုင်ပါမယ်
ကဲ့ဒါဆို သင်လဲ Autorun Service ပိတ်ချင်ပြီထင်ပါတယ် ဘယ်လိုပိတ်မလဲ စလိုက်ရအောင်ဗျာ.....ဟီးးး
ပထမဆုံးအနေနဲ. ၀င်းဒိုးကီးနဲ. R ကိုတွဲနှိပ်ပြီ Run Box ကိုခေါ်လိုက်ပါ လာခဲ့စမ်း run box ပေါ့ .....:P
အိုခီ Run Box ကျလာရင် အထဲမှာ gpedit.msc ဆိုတာ ရိုက်ပြီး Enter ခေါက်လိုက်ပါ ဒါဆိုရင်အောက်က ပုံလေးလို
group policy editor ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် အဲ့ဒီမှာအပေါ်ပုံမှာ ပြထားတဲ့အတိုင်း User Configuration ရဲ.အောက်က Administrative Template Tool ကိုဝင်ပါ
ပြီးသွားရင်တော့အပေါ်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းWindowsComponentsထပ်ဝင်ပါပုံတွေနဲ.တစ်ဆင့်ခြင်းပြ ထားလို.သာနည်းနည်းရှုပ်နေမယ်ထင်ပါတယ်သေချာလေးလုပ်ကြည်.ပါလွယ်လွယ်လေးပါနော်နောက် တစ်ဆင့် အောက်မှာ ပြထားသလို Auto Play Plolicies ကိုထပ်သွားပါမယ်
အိုကေ ပြီးသွားပြီဆိုရင် တစ်ဖက်မှာရှိတဲ့ Turn off AutoPlay ဆိုတာလေးကို ကလစ် နှစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ
အပေါ်ပုံက အနီနဲ.ကွင်းပြထားတဲ့နေရာလေးမှာပါ....... ဒါဆို Turn off AutoPlay ပွင့်လာပါပြီ...
အိုကေ အပေါ်ပုံမှာပြထားသလို Not Configured နေရာကနေ Enabled ပြောင်းပေးရပါမယ် Options မှာ တော့ Turn off Autoplay on နေရာမှာ All drivers မှာထားပေးပြီးရင် Apply နှိပ်ပါပြီးရင် OK ပေါ့ ဒါဆို အားလုံးပြီးပါပြီ သင့်ကွန်ပြူတာကို restart ချပေးလိုက်ပါ ပြန်တက်လာရင် Autorun ပိတ် ထားပြီးသားဖြစ်နေပါပြီ ........................အားလုံးပဲအဆင်ပြေပါစေဗျာာာာ